» षडज् राउण्डमा यति कडा प्रतिस्पर्धा
षडज् राउण्डमा यति कडा प्रतिस्पर्धा
१८ श्रावण २०७७, आईतवार १७:२८
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १८ साउन । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ को दोस्रो राउण्ड सुरु भएको छ । दोस्रो राउण्ड अर्थात षडज् राउण्डमा यसअघि अडिसन राउण्डबाट छानिएका १ सय २२ जना प्रतियोगीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । अहिले संसारको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल स्टार टिमले भौतिक दुरी कायम गरी प्रतियोगिताको दोस्रो राउण्ड सुरु गरेको हो । यस राउण्डमा सहभागी भएका प्रतियोगीहरुले नेपाल स्टार टिमले तयार पारेको म्युजिक ट्रयाकमा गीत तथा भिडियो रेकर्ड गरी अनलाईनको माध्यमबाट पठाएका थिए । त्यही रेकर्डिङलाई निर्णायकहरुमाझ प्रस्तुत गरी अर्को राउण्डका लागि प्रतियोगीहरुलाई छानिएको छ । यस भिडियो सामग्रीमा हामी षडज् राउण्डको पहिलो भागमा कसले कस्तो प्रस्तुति दिए ? को छानिए अनि को बाहिरिए भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । नेपाल स्टारको अन्य राउण्ड तथा प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट–
षडज् राउण्डमा सबैभन्दा सुरुमा निर्णायकहरुको लकडाउन अनुभव समावेश गरिएको थियो । उनीहरुले लकडाउनका समयमा आफुले गरेका रमाईला कुराहरु बताएका थिए । त्यसपछि यस राउण्डको पहिलो प्रस्तुति समिरा थपलियाले दिएकी थिईन् । अडिसन राउण्डमा सुर्खेतबाट छानिएकी उनले दोस्रो राउण्डमा श्रेया सोताङको आवाजमा रहेको ‘अलि अलि’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको आवाज सुनेर निर्णायक रामकृष्ण ढकालले आफुलाई प्राउड फिल भएको बताएका थिए । पहिले संगीतबिनै समिराको आवाज सुनेको भएता पनि अहिले पियानोमा सुन्दा निक्कै राम्रो लागेको उनले बताए । समिराको प्रस्तुति पश्चात आफुहरुले राम्रा मानिसहरुलाई छनौट गरेको र रियल पर्फोमरका रुपमा समिरालाई पाएको उनले बताए । समिराको प्रस्तुतिलाई तिनै जना निर्णायकहरुले प्रशंसा गरेका थिए । यस राउण्डको दोस्रो प्रस्तुति दामोदर बस्नेतले दिएका थिए । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका दामोदरले प्रेमध्वज प्रधानको आवाजमा रहेको ‘घुम्तिमा नआऊ है’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुति पश्चात निर्णायकले के भने त्यो भने भिडियोमा राखिएको थिएन ।
तेस्रो प्रस्तुतिमा अर्का चर्चित प्रतियोगी कमल रसाईलीले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले गायक शिव परियारको ‘अलिकति नजर तिम्रो’ बोलको गीत गाएका थिए । कमलको प्रस्तुति पश्चात सबै निर्णायकले ताली बजाएका थिए । उनको प्रस्तुतिले मन खुशी भएको भन्दै निर्णायकहरुले उनको प्रशंसा गरेका थिए ।
यस राउण्डको चौथो प्रस्तुति फुर्बा लामाले दिएका थिए । उनले नाईन्टिन सेभेन्टी फो एडीको ‘सम्बोधन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिलाई पनि निर्णायकहरुले मन पराएका छन् । पाँचौँ नम्बरमा अर्का प्रतियोगी मानव परियारले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले एड्रियन प्रधानको ‘सम्झनामा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुति सोचेको जति नभएको निर्णायक आलोक श्रीले बताए । तर निर्णायक रामकृष्ण ढकालले भने पहिला राम्रो गरेकाहरुले पछि बिगार्न सक्ने सम्भावनालाई स्विकार गरे । छैटौँ नम्बरमा सन्दीप सुनुवारले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । उनले मन्त्र ब्याण्डको ‘सधैँ सधैँ’ बोलको गीत गाएका थिए । प्रस्तुतिका क्रममा लुक्सका कारण पनि चर्चा पाएका सन्दीपले प्रस्तुति पश्चात पनि प्रशंसा बटुलेका छन् । उनको प्रस्तुति पश्चात तिनै जना निर्णायकले उनको प्रशंसा स्वरुप ताली बजाएका थिए ।
त्यसपछि अर्का चर्चित प्रतियोगी सलिना बिकले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । सातौँ नम्बरमा प्रस्तुति दिएकी उनले समृद्धि राई र रोहित जोन क्षेत्रीको आवाजमा रहेको ‘हेर न तिमी र म’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको प्रस्तुति पश्चात निर्णायक अञ्जु पन्तले आफुलाई साह्रै खुशी लागेको बताएकी थिईन् । सलिनाले आवाजको ठहेराब राम्रो पकडेको र सुर, फिल र फ्लो राम्रो भएको निर्णायकहरुले बताए । त्यस्तै आठौँ नम्बरमा विशाल कुँवरले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले गायक प्रमोद खरेलको ‘म बाँचेकै’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुति पश्चात निर्णायकहरुले के भने त्यो भने एपिसोडमा राखिएको थिएन ।
षडज् राउण्डको नवौँ प्रस्तुति दिपेश लामाले दिएका थिए । दिपेशले एड्रियन प्रधानको ‘जब तिमी’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेका थिए । राम्रो प्रस्तुति दिएका दिपेशको सम्मानमा निर्णायकहरुले ताली बजाएका थिए । दिपेशको लो अक्टेव राम्रो भएको भन्दै एकसाएक गाएका कारण दोस्रो राउण्डमा प्रतियोगीहरु छान्न आफुहरुलाई निक्कै अप्ठ्यारो हुनसक्ने निर्णायकहरुले बताए । यस राउण्डको दशौँ नम्बरमा अर्का चर्चित प्रतियोगी समिक्षा दाहालले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उनले सुक्मित गुरुङको आवाजमा रहेको ‘पल पल तिम्रै’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । रोमान्टिक भावनामा ओतप्रोत भएको यो प्रस्तुतिलाई निर्णायकहरुले ताली बजाएर प्रशंसा गरेका थिए । उनको प्रस्तुति पश्चात निर्णायकहरुले ‘सिम्प्ली द बेस्ट’ भनेर कमेन्ट गरेका थिए । यस एपिसोडको एघारौँ नम्बरमा मीना नेपालीले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उनले रिमा गुरुङ होडाको आवाजमा रहेको ‘कसको आँखा लाग्यो बरै’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको प्रस्तुति पश्चात निर्णायकहरुले के भने त्यो फुटेज एपिसोडमा राखिएको थिएन । त्यसपछि बाह्रौँ नम्बरमा प्रतियोगिताकी अर्की चर्चित प्रतियोगी प्रेक्षा लम्सालको प्रस्तुति राखिएको थियो । उनले आशा भोष्लेको आवाजमा रहेको ‘झझल्को लिएर आएछ सावन’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । सुमधुर आवाजले मन जितेकी प्रेक्षा यो प्रस्तुतिमा निर्णायकहरु खुशी भएका थिए । केही सुधारको जरुरी भएता पनि उनको आवाजले आफुहरुको मन छोएको निर्णायकहरुले बताए ।
यस राउण्डको तेह्रौँ नम्बरमा प्रतियोगिताका अर्का चर्चित प्रतियोगी नकुल कार्कीले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले गायक मिङ्मा शेर्पाको ‘अब हाम्रो बेला’ बोलको गीत गाएका थिए । आफ्नो प्रस्तुतिबाट निर्णायकहरुलाई प्रभावित पार्न सफल भएका नकुललाई निर्णायकहरुले ताली बजाएर प्रशंसा गरेका थिए । उनको प्रस्तुतिले गायक ईश्वर गुरुङको याद दिलाएको भन्दै निर्णायक रामकृष्ण ढकालले उनको प्रशंसा गरे । यस एपिसोडको चौधौँ नम्बरमा किरण गुरुङले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले द एज ब्याण्डको ‘यो दिल मेरो’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुति पश्चात निर्णायकहरुले उनको प्रशंसा गरेका थिए । उनको थ्रो निक्कै राम्रो भएको निर्णायक रामकृष्ण ढकालले बताए । त्यसपछि प्रतियोगिताका अर्का चर्चित प्रतियोगी सुनन्द ढकालले प्रस्तुति दिएका थिए । पन्ध्रौँ नम्बरमा प्रस्तुति दिएका उनले नारायण गोपालको आवाजमा रहेको ‘तिमीले पनि मजस्तै’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रशंसामा निर्णायकहरुले ताली बजाएका थिए । उनको गला पनि राम्रो चल्ने निर्णायक रामकृष्ण ढकालले बताएका थिए । त्यसपछि एपिसोडको सोह्रौँ प्रतियोगीले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले ‘कोमल त्यो तिम्रो बदनमा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिपश्चात सम्भावना राम्रो भएको भन्दै उनको ल्याण्डिङ नोटहरुमा ध्यान दिनुपर्नेमा निर्णायकहरुले जोड दिएका थिए ।
उक्त एपिसोडको सत्रौँ नम्बरमा सुनिल बस्यालले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले मनिश ढकालको आवाजमा रहेको ‘परदेशी नभन’ बोलको गीत गाएका थिए । आफ्नो प्रस्तुतिबाट निर्णायकहरुलाई प्रभावित पारेका सुनिलको प्रशंसामा निर्णायकहरुले ताली बजाएका थिए । उनको फिलको प्रशंसा गर्दै निर्णायकहरुले उनको प्रस्तुतिमा डुबेको बताएका थिए । त्यसपछि अठारौँ नम्बरमा सानकुमार तामाङले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले स्वरुपराज आचार्यको आवाजमा रहेको ‘मन मोहिनी’ बोलको गीत गाएका थिए । निक्कै नै राम्रो प्रस्तुति दिएका उनको निर्णायकहरुले प्रशंसा गरेका थिए । उन्नाईसौँ नम्बरमा प्रतियोगिताका अर्का चर्चित प्रतियोगी सगुन आङ्देङ्बे लिम्बुले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले गायक सुनिल बर्देवाको ‘गोरेटो अनि’ बोलको गीत गाएका थिए । आफ्नो प्रस्तुतिबाट निर्णायकको मन जित्न सफल सगुनले मिठो गाएको भन्दै निर्णायकहरुले ताली बजाएका थिए । त्यसपछि बिसौँ नम्बरमा रञ्जन सोताङ राईले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले जगदिश समालको आवाजमा रहेको ‘म त मर्छु क्यारे’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुति पछि निर्णायकहरुले उनलाई रियाज बढाउन सल्लाह दिएका थिए । एपिसोडको एक्कासौँ नम्बरमा प्रतियोगिताका अर्का चर्चित प्रतियोगी सिद्धान्त खड्काले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले प्रसाद चलचित्रको ‘जाउँ माया सरर’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले निर्णायकहरुलाई प्रभावित पार्न सफल भए । उनलाई निर्णायकहरुले गुड पर्फोमरका रुपमा चर्चा गरे । उनको थ्रो र भ्वाईसको क्वालिटीको पनि निर्णायकहरुले चर्चा गरेका थिए ।
एपिसोडको बाईसौँ नम्बरमा सञ्जय लिम्बुले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नारायण गोपालको आवाजमा रहेको ‘यति चोखो यति मिठो’ बोलको गीत गाएका थिए । निकै सुमधुर प्रस्तुति दिएका सञ्जयका बारेमा निर्णायकहरुले के भने त्यो भने प्रसारित एपिसोडमा देखाइएको थिएन । त्यसपछि तेईसौँ नम्बरमा अर्का प्रतियोगी रिवाज घतानीले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नेपथ्य ब्याण्डको यो जिन्दगानी बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा निर्णायकहरु सकरात्मक देखिएका थिए । प्रतियोगीहरुमध्ये चौबिसौँ नम्बरमा सुमन ठकुरीले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले द एज ब्याण्डको ‘तिम्रो जीत मेरो हार’ बोलको गीत गाएका थिए । त्यसपछि पच्चिसौँ नम्बरमा नरेन्द्र बिकले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले भक्तराज आचार्यको ‘जहाँ छन् बुद्धका आँखा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा केही कमेन्टहरु समेत गरिएको थियो । त्यसपछि छब्बिसौँ नम्बरमा प्रतियोगिताका अर्का चर्चित प्रतियोगी विश्वशान्त राईले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले गायक रामकृष्ण ढकालको ‘तिम्रो आगमनले’ बोलको गीत गाएका थिए ।
सत्ताईसौँ नम्बरमा मौसम खरेलले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले प्रकाश श्रेष्ठको आवाजमा रहेको ‘फेवातालको आँगनमा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिपश्चात निर्णायकहरुले ताली बजाएर उनको प्रशंसा गरेका थिए । उनले गारो गीतलाई पनि सजिलोसँग गाएको र शब्द प्रष्ट उच्चारण गरेको बताएका थिए । निर्णायकहरुले मौसमलाई छानेकोमा गर्व लागेको बताएका थिए । यस राउण्डमा प्रस्तुति दिएका २७ जनामध्ये निर्णायकहरुले १२ जनालाई छनौट गरेका छन् । तेस्रो राउण्डका लागि छानिएका प्रतियोगीहरुमा सलिना बिक, कमल रसाईली, समिरा थपलिया, सिद्धान्त खड्का, सुनिल बस्याल, सुनन्द ढकाल, प्रेक्षा लम्साल, सानकुमार तामाङ, किरण गुरुङ, मौसम खरेल, समिक्षा दाहाल र दिपेश लामा रहेका छन् । बाँकी १५ जना प्रतियोगीहरु भने शोबाट बाहिरिएका छन् । छनौट भएका र बाहिरिएका प्रतियोगीहरुका बारेमा थप जानकारी आगामी भिडियोहरुमा प्रस्तुत गरिनेछ । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।